Forgotten (2017) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
N/A 2017 108 min Mystery, Thriller
IMDB: 7.3/10 7,045 votes
ယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် special movie လေးကတော့ မင်းသားချော၂လက်ဖြစ်တဲ့ Kang Ha-nuel နဲ့ Kim Mu-yeol တို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်၊သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားလေးပါ။
(ချစ်ကြိုက်မယ့်မင်းသမီးမပါသလို Bl ကားလည်းမဟုတ်ပါ)
ဂျင်ဆော့(Kang Ha-nuel)ရဲ့ အစ်ကို ယူဆော့(Kim Mu-yeol)တစ်ယောက် ပြန်ပေးဆွဲခံရပြီးနောက် သူ့အစ်ကိုဘာလို့ပြန်ပေးဆွဲခံရတာလဲဆိုတာကို ဂျင်ဆော့တစ်ယောက် ဖော်ထုတ်ပါတော့တယ်။ ၁၉ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့အစ်ကိုက အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့် အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့လူက သူ့အစ်ကိုနဲ့ရုပ်ချင်းတူနေတဲ့လူဖြစ်နေတာကို သူသိတဲ့အချိန်မှာတော့…..?
သူ့ကို ဘာလုပ်ဖို့အတွက် အဲ့ဒီလူက ရောက်လာတာလဲ?
သူ့မိဘတွေကရော အဲ့ဒီကိစ္စကိုသိတော့ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ ဆိုတာ နက်နဲတဲ့အတွက် ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Spoiler: အထက်က ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက မှန်လား/မမှန်ဘူးလားဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်မှ သိနိုင်ပါမည်။😀
Warning- *ဤဇာတ်ကားအား တစ်ချက်ကလေးမှ ရစ်မကြည့်ပါနဲ့*✌
Kang Ha-neul Kim Mu-yeol Lee Eun-woo Moon Sung-keun Na Young-hee Nam Myung-ryeol
Option 1 mfile.cloud 511 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 511 MB SD (480p)
Option3drive.google.com 511 MB SD (480p)
Option4drive.google.com 511 MB SD (480p)